Euphorbia Cyparissias Ezikhula iminyaka eminingi libhekisela umndeni Euphorbiaceae. Lena clan kahle esikhulu, okuyinto iyisonto ezingaphezu kuka 7,000 kanye nezingane ezizalwa mayelana 3,000. Iningi lo mkhaya ukhetha ezishisayo kanye ezisondelene nazo. EYurophu nase-Asia - endaweni lapho likhula endle nomsayipuresi spurge. Ngesizotha eba on nenhlabathi sandy, nasemagqumeni futhi nemithambeka, kanye amahlathi zikaphayini.
Igama wonke umndeni liyazikhulumela. abameleli bakhe uma elimele ihlaba umkhosi ubisi elimhlophe Milky, okuyinto enobuthi. Futhi uma usebenza nge isitshalo ezinjalo kungcono ukusebenzisa amagilavu. Cypress spurge (lesi sithombe sibonisa) has uqotho neziqu nge yokuqala ezinabantu amahlamvu inaliti. Ziyakwazi kulo lonke isizini umbala ushintsho kusuka ophuzi ukuze shades of aluhlaza-grey ithoni, okubenza babe ngisho nangokwengeziwe.
On wonke amahlathi zalesi sitshalo yakha ibhola okuxekethile omangalisayo, into efuze leyo zokhuni. Ngesikhathi ukuphakama ifinyelela akukho kuka-40 cm, futhi libhekisela izitshalo cover emhlabathini. Kusukela ngo-May kuya ku-June ibonakale elincane elimnandi Izimbali ugodo ephuzi. Banjengemafu ubuhlalu ehlakazekile ukukhanya ipuleti oluhlaza. Futhi yokuqhuma iyaphindwa ekwindla.
Cypress spurge uye branched izimpande ezinwabuzelayo, ngakho angabacwasi ngokushesha yandisa, akhombise indawo entsha. Kungaba itshalwe iyiphi inhlabathi. kokwehla indawo Kungavulwa noma ukubopha, kodwa kungcono uma iyindawo libalele. Ezindaweni shady kakhulu uyoveza eziningi izinqubo, kodwa izimbali zawo ziwukudla ahlale sasivumela ayindlala.
It zingandiswa ngokuyihlukanisa ehlathini izingxenye rhizomes noma imbewu. Samuntu lokuqala nelesibili kukhona ekuqaleni September futhi ekupheleni kuka-April. Imbewu ekhanyayo ukutshala kangcono ekwindla. Ngomqondo onabile, wonke amalungu alo mkhaya kungenziwa ngokuthi linesizotha, kuhlanganise nomsayipuresi spurge, ukubanakekela kudingeka ubuncane. Njengoba zonke zenzeka spurge zimila ezindaweni efudumele futhi omile, banayo ikhono buthelela umswakama esitolo. Ngakho akudingeki ukuthambisa njalo. Lokhu kumele kwenziwe kuphela esikhathini lokoma. Namanje sidinga Ukuhlakula ukhula njalo futhi 2-3 izikhathi ukondla umquba. A kwekwindla ungakhohlwa usike amahlumela usubunile kakade. Empeleni, konke ukunakekelwa.
Uma sikhuluma izifo, le spurge nomsayipuresi kakhulu ehlaselwe ukunakekelwa okungafanele, okungukuthi, babutha umswakama. Uma uqaphela ukuthi simila eshiya droop bese ufa, inhlabathi umswakama kakhulu. Lokhu ikakhulukazi waphawula ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi, lapho umswakama okweqile kusukela izimpande ukubola futhi KWAMAGUNDANE izifo isitshalo fungal. Of izinambuzane kungalimaza Silakho futhi spider ngomnikelo omncane, nakuba lokhu oluphakeme ezingavamile.
Njengoba nomsayipuresi spurge azigcina zokuhlobisa yayo yonke inkathi, it is ukucindezelwa kwakuvame ukusetshenziswa njengezaba ngemuva, okuyinto kahle ngokuhlanganiswa imibala nezinye Ezikhula iminyaka eminingi. Landscape abaklami basebenzisa yona ukudala rock izingadi kanye izingadi enamadwala. Futhi ukufana yayo nge zokhuni kuyivumela ufane kwenkinga iyiphi abameleli AmaConifers. Phakathi zom nomsayipuresi spurge ukubukeka ngokunethezeka esikhathini ukuphila vase. Futhi ukuze ayibulale ijusi ezikhishwe, izihloko zezingongolo sifanamsindvo ngokwanele bacwilisa emanzini ashisayo imizuzu embalwa.
"Philips S388" (smartphone) izici, ukubuyekeza kanye impendulo